▷ Ahoana ny fomba fampandehanana rakitra .sh amin'ny tsindry indroa sy amin'ny terminal
firosoana >> Software >> Linux >> Ahoana ny fomba fampandehanana rakitra .sh
Jereo ny fomba fitantanana azy amin'ny terminal ary tsindrio indroa
ny rakitra misy extension .sh dia rakitra izay misy script, baiko amin'ny fiteny bash, izay mandeha amin'ny Linux. SH dia akorandriaka Linux iray izay milaza amin'ny solosaina ny tokony hatao.
Amin'ny fomba iray dia afaka nilaza isika fa azo ampitahaina amin'ny Windows .exe.
Misy fomba samihafa amin'ny fampandehanana azy. Hanazava aho 2. Ny iray misy ny terminal ary ny iray kosa misy ny interface graphique, izany hoe, miaraka amin'ny totozy, fa rehefa tsindrio indroa ianao dia novonoina. Azonao atao ny mahita azy amin'ny horonantsary ary etsy ambany ny dingana tsikelikely ho an'ireo izay tia fampianarana nentim-paharazana.
Mihazakazaha .sh miaraka amina interface interface sy totozy
Raha aleonao manao ny zava-drehetra amin'ny tsindry totozy dia azonao atao ihany koa izany. Mba hampandeha azy toy ny amin'ny Windows, tsindrio indroa ny rakitra ary manomboka izany. Misy dingana 2 izay haingana haingana hanamboarana azy.
Ny zavatra voalohany dia ny misafidy hilaza aminy fa azo tanterahina ilay rakitra
Mandehana any amin'ny misy ny fisie ary kitiho eo amin'ny bokotra ankavanana. Hiseho ny menio iray ary omenay fananana
Misafidy ny fanamarinana ny Avelao hihazakazaka ny rakitra. amin'izany fomba izany no manome alalana famonoana
Azontsika atao ny manararaotra manova ny kiheba Misokatra amin'ny, izay ilay programa izay nofidintsika ho default ho an'i Aprilos, raha sanatria ka tsy manefa azy ireo isika dia te hanokatra azy ireo ary hahita izay ao anatiny. Mampiasa Code Gedit na Visual Studio aho
Avy eo dia mila manamboatra ny mpitantana ny rakitra isika
Farany ao amin'ny manager manager dia mankanesa any amin'ny menio ary safidio safidinao ary ny kiheba fitondran-tena ary eo ianao dia afaka milaza azy izay tianao hatao amin'ny fisie.
Misy safidy maromaro. Sokafy ny fisie, alefaso izany na anontanio anay. Nisafidy ny hanontany anay aho. Ary toy izany no haseho antsika.
Mihazakazaha .sh amin'ny terminal
Manokatra terminal izahay, miaraka amin'ny Ctrl + Alt + T, manomboha lakile ary manoratra terminal na amin'ny kisary ati-doha izay ananako foana ao amin'ny mpandefa Ubuntu, andao ary, eo amin'ny sidebar ankavia.
Ny fomba fampandehanana azy dia ny mankany amin'ny lahatahiry misy ny fisie. alaivo an-tsaina hoe manana fisie ok.sh izahay ao amin'ny folder / scripts / folder
Mampiditra script miaraka aminay (tsy maintsy mandeha amin'ny làlana izay anananao ianao)
Raha vao sambany no nitantanantsika azy dia tsy maintsy omentsantsika alalana ny fisie
Ary avy eo isika dia mitantana azy
Ary voila eto ny filaharana
Raha ny momba anay dia mivoaka ny "Ok" satria niditra tamin'izay nataon'io script io izahay.
Ny zavatra manan-danja indrindra sy izay diso indrindra ataon'ny olona dia ny làlana, ny làlana, amin'ny tsy fahazoana miditra amin'ny fampirimana anaovana ilay rakitra.
Raha manana fanontaniana ianao dia mametraha hevitra.
Extra raha te hianatra ianao
Zavatra kely vitsivitsy raha te hianatra ianao. Betsaka ny baiko handefasana .sh azonao atao
./file.sh ny. dia manondro fa ny rakitra dia ao amin'ny lahatahiry ankehitriny, raha tsy azonao atao ny mihazakazaka azy amin'ny alàlan'ny lalana mankany amin'ny lalan'ny / mankany / file.sh
Baiko iray hafa mihazakazaka ankoatry ny rakitra ./sh dia
sh fisie sh
Sokajy Linux Ticket navigation
1 Mihazakazaha .sh miaraka amina interface interface sy totozy
1.1 Ny zavatra voalohany dia ny misafidy hilaza aminy fa azo tanterahina ilay rakitra
1.2 Avy eo dia mila manamboatra ny mpitantana ny rakitra isika
2 Mihazakazaha .sh amin'ny terminal
3 Extra raha te hianatra ianao